Ukuqinisekiswa kwekhwalithi - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Ukuqinisekisa ikhwalithi engaguquguquki nokuphepha komkhiqizo okuqinile, sisebenzisa uhlelo olunzulu lokuqinisekisa ikhwalithi.
Izinqubo ezenzelwe kahle zokulawula ikhwalithi ziholela kumikhiqizo esezingeni eliphakeme. Sizibophezele ekusetshenzisweni kwe-HACCP nezinye izinyathelo ezinkulu zokulawula ikhwalithi, kusukela kulungiselelo olujwayelekile lekhwalithi, ukumboza izinto zokusetshenziswa, imikhiqizo eqediwe kanye nemikhiqizo eqediwe. Imikhiqizo eqediwe efanelekile kuphela ngaphandle kokukhubazeka engangena emakethe.
Okubalulekile Kokusetshenziswa Okubalulekile
Amanzi ethu okukhiqiza avela emfuleni wentaba yasentabeni, ukuqinisekisa ikhwalithi enhle kakhulu yemikhiqizo. Izinto zokusetshenziswa zivela esikhunjeni esisha sezingulube, emathanjeni enkomo njalonjalo okudlulise ukwahlukaniswa yiminyango yezempilo.
I-European Union kanye noMnyango wezoLimo wase-United States bachaza: ukukhiqizwa kwe-gelatin ngemuva kwezinsuku ezi-3 zokufakwa kwe-asidi, izinsuku ezingama-35 zokulondolozwa komlotha, isisombululo se-gelatin ngemuva kokuvala inzalo ngo-138 ℃ imizuzwana engu-4 yemikhiqizo ephephile (okusho ukuthi, mahhala nge-BSE). Kodwa-ke, inkampani yethu empeleni isebenzisa inqubo yokukhiqiza ye-hydrochloric acid leaching enokugxila okungaphezulu kuka-3.5% okungenani izinsuku eziyi-7, umlotha ongena okungenani izinsuku ezingama-45, nesisombululo seglue esenziwe inzalo ngo-140 ℃ imizuzwana engu-7.
Imikhiqizo yethu isidlulile i-ISO22000, i-HALAL, isitifiketi se-HACCP, futhi inkampani ine- "License Production Production" kanye ne "License Production Production" ekhishwe yi-State Food and Drug Administration.
Ukuphepha kuyinto ehamba phambili, sihlinzeka kuphela ngemikhiqizo ephephile ye-gelatin emakethe. Ama-gelatins ethu ahlolwe kanzima futhi aqinisekiswa esikhungweni sethu sokuhlola futhi anezindinganiso ezisezingeni eliphakeme kakhulu nohlu oluphelele lokuhlola. Yingakho sikwazi ukuhlangabezana noma ukweqa izidingo zokuphepha eziphakeme kakhulu ezikhona.